Global Voices teny Malagasy » Mikendry ny Hiaro ireo Elefanta Sisa Tavela Any Myanmar ny Fanentanana ‘Voices for Momos’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Mikendry ny Hiaro ireo Elefanta Sisa Tavela Any Myanmar ny Fanentanana ‘Voices for Momos’
Voadika ny 07 Marsa 2018 4:32 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Zo Razafy
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Elephanta hazo mandonda, Myamar. Sary nalain'i James Anderson, World Resources Institute. loharano: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Maro ireo vondrom-piarovana sy mpiaro ny tontolo iainana no nanambatra ny hery hanao fanentanana mba hampiroboroboana ny fiarovana ny elefanta, fantatra ho “momos” amin'ny fiteny Birmana, mihena isa any Myanmar,
Mandrisika ny vahoaka handà ny fivarotana tsy ara-dalàna ny sombin-taovan'elefanta sy ireo bibidia hafa ny fanentanan'ny  “Voices for Momos”. Miantso ny governemanta ihany koa izy hampihatra programa maro hanatsaharana ny fihazana elefanta sady manome antom-pivelomana hafa ho an'ny mpihaza.
Heverina  ho 1400 hatramin'ny 2000 ny isan'ny elefanta mpirenireny. Elefanta iray isan-kerinandro no maty araka ny tatitra, ary misy ny nampitandrina fa mety ho ripaka ao anatin'ny roapolo taona ny elefanta ao Myanmar raha tsy mijanona ny famonoana.
Nampitandrina ny tatitry ny gazety iray vao haingana fa mety hihamafy ny fihazana elefanta any Myanmar satria nandidy ny hanenjehana ny fivarotana bibidia amin'ny fomba tsy ara-dalàna i Shina mpifanolo-bodirindrina aminy. Mety hampitombo ny tinadin'ireo vokatra tsy fahita avy ao Myanmar ireo mitady sombin'elefanta sy biby hafa tandindonin-doza.
Nolazainy ihany koa fa mitobaka  eo akaikin'i pagôdan'i Rangoon sy fitoerana masina hafa izay matetika tsidihan'ireo ireo mpizahatany eo an-toerana sy vahiny ny fivarotana sombin'elefanta.
Tanjona lehiben'ny fanentanana “Voices for Momos” ny ezaka fanabeazana ny vahoaka momba ny fiarovana ny elefanta. Iray amin'ireo hetsika natao hisarihana ny sain'ny besinimaro ny fampiratiana sarivongana saribakoly miloko marevaka manerana an'i Rangoon. Lehibe indrindra  manerana izao tontolo izao ny elefanta papier-mâché natao tamin'ny gazety lany daty, araka ny hevitr'ireo artista ao an-toerana.
Voaporofo ho nahaliana ny ankizy ny seho:
Natomboka ihany koa ny fanangonan-tsonia ho anisan'ny hetsika  itakiana amin'ny governemanta ny fitarihana fanoherana ny fihazàna sy ho hetsika fitarihana ny vahoaka hanajanona ny fividianana antsokosoko ireo vokatra avy amin'ny biby. Maherin'ny 2000 ireo olona nanao sonia tamin'ny fotoana nanoratana [ny teny anglisy]
Lahatsary  iray nataon'ny fanentanana nanasongadina ireo mpanakanto tao an-toerana nandrisika ny mpijery hanavotra ireo elefantan'i Myanmar.
Nandrisika ny handefa fitiavana ny elefanta amin'ny fotoana fankalazana ny andron'ny mpifankatia tamin'ny 14 Febroary ilay fanentanana:
Arahabaina nahatratra ny andron'ny mpifankatia avokoa ny mpanjohy anay rehetra
Afa-nampiasa ny stickers  an'ny Viber ihany koa ireo mpiserasera amin'ny finday ho fanohanana ny “Voices for Momos”.
Vao ny dingana voalohany amin'ny fanentanana fotsiny ny fanairana ny daholobe momba ny momos. Ny fanamby manaraka kosa dia ny fampandraisana andraikitra ireo manampahefana ao an-toerana sy ireo mpihaza amin'ny filàna fampiatoana ny famonoana elefanta.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/07/115423/
 Lehibe indrindra: https://beirutibrit.wordpress.com/2017/11/18/voices-for-momos/